ကောင်းကင်ဖြူ: မှားနေတဲ့ အမှန်တရား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ .... လွတ်လပ်စွာ ရေးသာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ စိတ်ထဲရှိတာလေး တစ်ခုလောက် ပြောပြချင်ပါတယ် ….
ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ နေ မြင်နေရလို့ရေးချင်တာနဲ့ရေးမိပါတယ် ….
ဒီနှစ်ထဲမှာ သူငယ်ချင်း တော်တော် များများ အိမ်ထောင်ပြုကြပါတယ် …. တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အရမ်းချစ်လို့တကယ်တမ်း လက်ထပ်မယ် လုပ်ရော … ထင်သလောက်မလွယ် တာတွေ တွေ့ ရပါတယ်
အဲလို လက်ထပ်ကြတဲ့ အထဲမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ လက်ထပ်မို့ အားလုံး စီစဉ်ပြီးကာမှ ဘာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခုကြောင့် အခုဆို ချစ်သူအဖြစ်ကနေပါ လမ်းခွဲတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်သွားပါတယ် ….အများပြောကြသလို ဖူးစာမပါလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို ကျနော် လက်ခံမို့အခက်တွေ့ ရပါတယ် …
လူ့ လောကကြီးမှာ တချို့အမှန်တရားတွေဟာ မှားနေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ် … အခုလို ခေတ်မှာ ယောက်ကျား မိန်းမ ခွဲခြားတက်ပါသလားလို့ မေးရင် … မခွဲခြားပါဘူးလို့အားလုံးဖြေကြမှာပါ …
ခက်တာက တကယ်တမ်း အိမ်ထောင်ပြုမို့စဉ်းစားတဲ့ အချိန်ကြရင် မျှတမှု့ မရှိတဲ့ ခွဲခြားမှု့ လေး တစ်ခုတွေ့ ရလို့ ပါ … သေချာ စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း ဒီအကြောင်းရာကို မတရားဘူးလို့ဘယ်သူမှ ပြာကြတာ မတွေ့ ပါဘူး … ဒီလိုပါ ….
သတိုးသားလောင်းတော်တော်များများနဲ့သတိုးသားဘက် အသိုင်းဝိုင်း သတိုးသမီး ကို အဖြူစင်ဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့ အကြောင်းပါပဲ … ကျနော် တို့ ယောက်ကျား လေးတွေ ဟာ ကိုယ့်လက်ထပ်မဲ့ သတိုးသမီး ကို အဖြူစင်ဆုံး ဖြစ်စေ ချင်ကြပါတယ် … အားလုံးပဲနော် … ငါ့တို့ တော့မပါဘူးလို့ မပြောပါနဲ့ …
ဒါပင်မဲ့ ကိုယ်တိုင် ရော ဖြူစင်ပါသလားလို့မတွေးမိတက်ကြပါဘူး … သတိုးသမီးနှင့် အသိုင်းဝိုင်းက ဒီသတိုးသားဟာ အိမ်ထောင်မရှိဘူး လို့ ဆိုရင်ပဲ လက်ခံတက်ကြပါတယ် … သတိုးသားကဖြူစင်ပါသလား လူပျိုစစ်ပါသလား ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးမရှိပါဘူး …
သတိုးသားတွေဘက်ကတော့ ကိုယ်လက်ထပ်မဲ့ သတိုးသမီး ဖြူစင်ရဲ့လားဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးလောက်ပဲ ရှိပင်မဲ့ … ခက်တာက သတိုးသားထက်ကို သတိုးသားမိဘတွေနဲ့ အသိုင်းဝိုင်းက ဒီသတိုးသမီး ဖြူစင်ပါသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းများစွာမေးတက်ကြပါတယ် … ဒါဟာ ကျနော် တို့ မြန်မာရိုးရာ အစဉ်လာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ …
သေချာ တွေးကြည့်ပါ .. ကိုယ့်တိုင်က ဖြူစင်တဲ့ သတိုးသမီးကို လက်ထပ်ချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ရော ဖြူစင်သင့်ပါသလား … လို့ တွေးကြည့်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် …
ကျနော် တို့ မြန်မာရိုးရာမှာ ယောက်ကျားလေး တစ်ယောက်ဟာ လူပျို ဘဝ ကို ထိန်းသိမ်း ရမယ်လို့ ဘယ်သူကမှ မပြောကြသလို တချို့ ဆို၇င် အခုလို ပြောရင်ပဲ “ မင်းတော့ရှုးသွားပြီး “ လို့ပြန်ပြောတက်ကြပါတယ် …. ဒီနေရာမှာ နှမချင်းမစာနာ ခက်ညံ့ညံ့ ယုတ်မာတဲ့ သူတွေ ပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ် … “ အသား မစားတဲ့ ကျား မရှိဘူးတဲ့“ ဒါဟာ ဆင်ခြေပေးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပါ …
မိန်းကလေးတစ်ယောက် အရွယ်ရောက်လာ၇င်တော့ မိဘ ပတ်ဝန်းကျင်း အသိုင်းဝိုင်းက ကိုယ့် ဘဝကိုတန်ဖိုးထားဖြူစင်မို့အမြဲတည်း သင်ပေးဆုံးမ တက်ကြပါတယ် ….
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ယောက်ကျားလေးတစ်ယောက် ရည်းစားနှစ်ယောက်ရှိရင် ဂုဏ်ယူပြောဆိုတက်ကြပင်မဲ့ … မိန်းကလေး တစ်ယောက် ချစ်သူ တစ်ဦး ပြီး တစ်ဦး ထားရင်ဆိုယုံပဲ ဒီကောင်မလေးက တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလို့ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုတက်ကြပါတယ် ...
ကျနော် အစ မှာ ပြောခဲ့သလို အားလုံးပဲ အမျိုးသားအ မျိုးသမီး မခွဲခြားဘူးဆိုးရင် .. ဒီလို တော့လွဲမနေသင့်ပါဘူး … အခုတော့ ဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာ ရိုးရာလို ဖြစ်နေပါပြီး ….
လောကကြီးမှာ ကိုယ် ယုံကြည့်တဲ့ မည့်သည့်ဘာသာတရားအရပဲ ကြည့်ကြည့် ခေတ်မှီတဲ့ နည်းပညာ အရပဲကြည့်ကြည့် တန်ပြန် သက်ရောက်မှု့ ရှိတယ် ဆိုတာ ငြင်းမရတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုပါ …
ကိုယ်တိုင်က ဖြူစင်မှု့ ကို လိုချင်၇င် ကိုယ်တိုင်လည်း လည်းဖြူစင်ရမယ် လေ … တန်ပြန် မှု့ ပဲပေါ့
ကိုယ်တိုင်ဖြူစင်သင့်မှန်း ၊ ဖြူစင်ရကောင်းမှန်း မသိပဲနဲ့ကိုယ် ချစ်လို့ ဆိုပြီ လက်ထပ်မဲ့ ချစ်သူကို ဖြူစင်ရဲ့ လားဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး မရှိသင့်ပါဘူး …
ခက်တာက သတိုးသားလောင်းတော်တော် များများ ဒီ အတွေးမျိုး ရှိနေတက်ပါတယ် .. ဒါ ဟာ ကျနော် ပြောချင်တဲ့ မှားနေတဲ့ အမှန်တရား တစ်ခုပါပဲ ….
မည်သူကိုမှ ရည်ရွယ်ပြီးရေးတာမဟုတ်ပါဘူး … ကျနော် အတွေး တွေ မှားနေတယ်ဆိုရင်လည်း လွတ်လပ်စွာ ပြောလို့ ရပါတယ် …..
ခင်မင်စွာ ဖြင့် ....
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:47 AM
jasmine(တောင်ကြီး) October 22, 2011 at 7:11 AM
Anonymous October 22, 2011 at 7:46 AM
MGTHANT October 22, 2011 at 8:17 AM
ကြိုက်တယ် ဒီစကားလုံး 'မှားနေတဲ့ အမှန်တရားပဲတဲ့'
blackroze October 22, 2011 at 11:15 AM
ပျိုတယ် အိုတယ် ဆိုတဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အယူအဆတွေရယ်....
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာက ကိုယ်ကတကယ်
တခုတော့ရှိတာပေါ့ ...သိသိကြီးနဲ့ မပြင်ဘဲ
တွေကတော့ ပိုပြီးတော့ ခြောက်ပြစ်ကင်း
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် October 22, 2011 at 9:21 PM
အိမ်မက်စေရာ October 23, 2011 at 7:05 AM
ဟုတ်တယ်..အိမ်မက်လဲ ချစ်သူနဲ့ ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးဖူးတယ်..အရမ်းကောင်းပါတယ်.. ဒီလိုအမြင်မျိုးရှိတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေ တအားနည်းပါတယ်..ချီးကျူးပါတယ်
mstint October 23, 2011 at 6:27 PM
ဆန္ဒနဲ့ဘဝ ထပ်တူကျဘို့ ခဲယဉ်းတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ခံယူချက်တွေခိုင်ခိုင်မာမာ ချထားပြီးသည့်တိုင် ကိုယ်လျှောက်လှမ်းရမည့် လမ်းကြောင်းကို အတိတ်ကံက ရွေးချယ်ပြီးသားပါ မောင်ဘုန်းရေ။
ဖြစ်တည်လာမှုကို လက်ခံပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ယူဆတယ်။
မဒမ်ကိုး October 23, 2011 at 10:29 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 24, 2011 at 12:42 AM
ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိန်းခလေးက ရည်းစားတွေ ထားခဲ့ဖူးလို့ မဖြူစင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ အထင်နဲ့ လမ်းခွဲပြီးနောက် ဖြူစင်လွန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ ရိုးရိုးအအမိန်းခလေးကို အချစ်မပါဘဲ လက်ထပ်ပြီးကာမှ အဲဒီမိန်းခလေးရဲ့ ရိုးအလွန်းမှုကို ဘယ်လိုမှ သည်းမခံတော့တာကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေတာမျိုးလည်း တွေ့ဖူးတယ်
လူနှစ်ယောက် အဓိက အရေးကြီးတာက တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချစ်ခင်မြတ်နိုးနိုင်မှု နားလည်ခွင့်လွတ်တတ်မှုတို့ပါဘဲ..
ဒါတွေ မပါခဲ့ရင် အပျိုစင်သတို့သမီးလေးကို ရစေဦးတော့ အိမ်ထောင်ရေး သာယာဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။
ကိုယ်တိုင်ကတောင် သူများကို မပေးနိုင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လိုချင် အတ္တတွေကို လျော့ချနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့နော်
ချယ်ရီမြေ October 24, 2011 at 6:52 AM
မောင်ဘုန်းရေ... တကယ်တော့ နှစ်ယောက်လက်တွဲပြီး နောက် ဖြူစင်နေကြဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အပျို၊ လူပျို အစွန်းအထင်းနဲ့ ဖြူစင်မှုမှာ မောင်ဘုန်းပြောသလိုပဲ တန်းတူအခွင့်အရေးတော့ ရှိသင့်တာပေါ့..
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု့...
ကျနော်၏ ..... မြတ်နိုးရာ သို့...